कसरी गर्ने गाई पालन ? – rastriyakhabar.com
कसरी गर्ने गाई पालन ?
ऋयधप्लान्ट एण्ड फुड रिसर्च न्युजिल्याण्डको सहयोगमा तराईका बाँके, सर्लाही र सुनसरी तथा पहाडका काश्कि धादिङ र काभ्रेमा तीन सय कृषकहरुमाझ गरिएको दिगो पशु आहारा अनुसन्धान कार्यक्रमबाट उक्त तथ्य पत्ता लागेको हो । त्यसैकारण गाई पाल्दा घाँसको व्यबस्थापन महत्वपुर्ण हुन्छ । कृषि बैज्ञानिकहरुका अनुसार एक वटा गाई पाल्न एक रोपनी जग्गामा घाँस खेती गर्ने योजना सँगसँगै बनाउनुपर्छ । अर्को महत्वपुर्ण बिषय गोठ व्यबस्थापनको हो । एउटा गाईले अर्को गाईलाई सामान्य अबस्थामा नछुने तरिकाले राख्नुपर्छ । बैज्ञानिक ढंगले बनाउँदा लम्बाई छ फिट र चौडाई चार फिट छुट्याईन्छ । घाँस तथा आहारा दिने ठाउँमा मल वा गोबर नलाग्ने हुनुपर्छ।